Crossword नगद | Crossword Jackpot खेल | CoinFalls अनलाइन क्यासिनो
crossword पहेली जस्तै तपाईं? तपाईं यसलाई प्ले गर्दा केही पैसा बनाउन चाहनुहुन्छ? यदि यी प्रश्नहरूको दुवै जवाफ हो हो, त्यसपछि Crossword नगद लागि बस. यो Crossword Jackpot खेल तपाईं शब्द संग एक महारत छ भने प्रयास गर्न एक. तपाईं के गर्न आवश्यक सबै केही शब्दहरू बनाउन र घर फिर्ता केही ठूलो बोनस लिन छ. यो खेल डिजाइन र उद्योग मा सबै भन्दा राम्रो देख तत्काल जीत खेल केही बनाउनको लागि प्रसिद्ध छ जो जो जुन kinase भन्दा अन्य कुनै पनि विकास गरिएको छ. ग्राफिक्स एक crossword पहेली र स्क्रयाबल बोर्ड रूपमा हेर्न डिजाइन. तपाईं के गर्न आवश्यक सबै बाहिर तपाईंलाई दिएको पत्र केही शब्द सिर्जना छ. सजिलो सुनिन्छ? खैर, यो छ! त्यसैले समय बर्बाद छैन, एक जो जुन kinase क्यासिनो जाने र यो अचम्मको प्ले Crossword Jackpot खेल अहिले.
Crossword Jackpot खेल Fantabulous विशेषताहरु
तपाईँ गृह स्क्रिनमा प्रविष्ट रूपमा लोगो तपाईं देख्न पहिलो कुरा हो. तलको तीन अलग अलग टेबल छन्. सही-हात पक्षमा, विभिन्न अक्षरहरू मिलेर तालिका छ. सही-हात पक्ष मा पुरस्कार को सबै मान छ कि पुरस्कार प्रमुख संग तालिका छ. जस्तै, यदि तपाईंले3शब्दहरू तपाईं बनाउन भने £5प्राप्त4words you get £10 and so on. अधिकतम 10 words will give youa£100,000 which is also the highest winning in one bet. पृष्ठ को केन्द्र मा तपाईं जहाँ तपाईं अक्षर शब्द सिर्जना गर्न राख्नु तालिका पाउनुहुनेछ. यो सबैभन्दा रोचक भाग Crossword Jackpot खेल यसको उच्च RTP मूल्य छ. RTP को मूल्य छ 86.62%, जो विशाल छ.
कसरी प्ले गर्न यो Crossword Jackpot खेल?
को गेमप्लेको Crossword नगद साँच्चै सजिलो छ. खेल सुरु गर्नु अघि, तपाईं क्लिक गरेर आफ्नो शर्त आकार सेट गर्न आग्रह गरिने + र _ बटन. जब तपाईं गरेका, प्ले बटनमा क्लिक गर्नुहोस्. नियमहरूमा सजिलो. दिएको हो 18 छ कि अक्षर शब्द गठन गर्ने सामेल गर्न. तपाईं स्क्रीन को केन्द्र मा crossword तालिका मा अक्षरहरू राख्नुपर्छ. तीन पत्र को एक न्यूनतम गठन गर्न आवश्यक. तपाईं बनाउन को लागि जीत हुनेछ कति तपाईं बताउँछ छेउमा एक पुरस्कार तालिका छ3वा बढी अक्षरहरू. प्लेयर प्रत्येक राउन्ड को अन्त पछि इनाम छ.
यो Crossword Jackpot खेल राम्रो स्क्रयाबल र Crosswords पोख्त छन् जो मानिसहरू लागि अत्यन्तै सजिलो छ. एक साँच्चै सजिलो कार्य शब्दहरू गठन गरिएको छ र यो केही राम्रो पैसा कमाउन पनि थप रोचक सुनिन्छ. साथै, विशाल RTP र शीर्ष वर्ग ग्राफिक्स यो खेल धेरै क्यासिनो प्रेमीहरूको द्वारा प्रशंसा बनाउन.